Klopp oo si layaab leh kaga hadlay barbarihii ay kooxdiisa Liverpool la gashay naadiga Newcastle United – Gool FM
Klopp oo si layaab leh kaga hadlay barbarihii ay kooxdiisa Liverpool la gashay naadiga Newcastle United
Dajiye December 31, 2020
(Liverpool) 31 Dis 2020. Liverpool oo barbaro la dhaafi weysay Newcastle United oo ay ku booqatay garoonka St James’ Park, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 0-0 ah, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada horyaalka Ingiriiska.
Inta ay ciyaarta socotay Liverpool ayaa isla lumisay fursado badan oo ay abuurtay, waxaana fursadihii ugu badnaa ka qasaariyeen xiddigaheeda Mohamed Salah iyo Roberto Firmino.
Haddaba macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Premier League waxaa ku jira kaliya kooxo fiican, waxaan helnay fursado waa weyn, kooxda naga soo horjeeday wey fiicneyd, tanina marwalba way dhacdaa.”
“Waan ka helay waxqabadka, aad ayey u fiicneyd, ma ciyaari karnaa kubad fiican? Haa, laakiin kulankaan waxaan sameynay waxyaabo badan oo aan ku guuleysan karno.”
“Waxaan u maleynayaa inaan helnay 4 fursadood oo aan ku dhalin karno 100%, waxaan kaga guuleysanay Newcastle hadda ka hor fursado intaan ka yar, balse caawa ma sameynin, laakiin waan aqbalnay taas.”
“Waan ku faraxsanahay wixii aan maanta arkay runti waan ka shaqeyn karaa, Ciyaartoyda way xanaaqsan yihiin waana tan ay xaqqa u leeyihiin laakiin marka loo fiiriyo waxqabadka waa aasaas lagu dhisi karo maalmaha soo socda, toddobaadyada, iyo bilaha soo socda.”
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane barbarihii ay Real Madrid la gashay kooxda Elche??
Jadon Sancho oo doortay kooxda uu jeclaan lahaa inuu ku biiro, haddii uu ka tago Dortmund… (Man United mise Liverpool?)